Home / Fitaovana an-dakozia / Faucets lakozia ao an-dakozia / WOWOW Varahina mameno paompy menaka fikosoham-bary
Ny fiasa amoronana dia mahatonga azy hijanona ivelan'ny sisa.
Manolotra fampisehoana mahomby sy azo atokisana dia mety ho an'ny trano fisakafoanana sy trano.
Manana trano mafy orina izy mba hanoherana ireo vongan-dàlana tsy ampoizina
2311100RB torolàlana fametrahana
WOWOW Fencet Fandramaina Fandramaina vita amin'ny menaka manondrahana varahina 2311100RB: Fofon-trondro fametaka pot, plastika varahina vita amin'ny vatan'ny paompy, grc an-dakozia miaraka amin'ny lamba tsara indrindra, miorim-bidy, mora sasana, varahina manadio fahatanjahana, mahery, tsy misy tomika, miaro ny loto .
Ny famenoana ny haronao, saika ny filana fandrahoan-tsakafo dia tsy mora kokoa noho ny fampiatoana mametaka. Ny fananganana rindrina miavaka amin'ny alàlan'ny fananganana rindrina dia ahafahana manome toerana fanampiny ao amin'ny kaontinao mandritra izany fotoana izany manome tombony miavaka.
Sobom-baravarankely an-dakozia miaraka amin'ny LARGE WATER FLOW RATE: grika kely iray mitam-piadiana miaraka amin'ny neoperl aerator dia manome tsindry maharitra ary mivantana ny renirano.
Tsotra ny napetraka amin'ny alàlan'ny famoronana hexagon. Azafady mba mifandraisa aminay raha manana fanontanianao ianao.
NSF fanamarinam-bokotra valam-pizarana NSF Manolotra fampiasa maimaimpoana
Nahazo ny alàlan'ny NSF ny kapital seramika tsy misy firaka, izay manome antoka ny habetsaky ny firaka amin'ny fitsipiky ny onjam-pandrindran'ny rano, ny fampihenana ny ratra mivantana sy ny fiarovana ny olon-tianao. Mihodina mora ny valva.
Famolavolana tsy misy fotony Miaraka amin'ny teknolojia farany
Dokotera mitovy D swing-swing
Miaraka amin'ny tonon-taolam-bolo roa, dia ahafahan'ny mpihaody mametaka mivoaka ny làlana rehefa tsy zatra.
Nofehezina vita tamin'ny varahina nanakatona ny sakan'ny tanany rehetra, mety tsara amin'ny fifehezana ny hafainganam-pandehan'ny rano na mamadika ny rano any amin'ny spout na rindrina, fampiasa tsotra
SKU: 2311100RB Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Faucets lakozia ao an-dakozia Tags: Black, varahina, Mpanefy vilany
C: menaka fantsom-pameno vilany nanosotra varahina